ucraine boss commander 1 month ago
muturi the bank owner thief whose bank broke down turned to be a spe****t of his own failures by another thief in command
Mutuvi anozivei hake, ini ndikatopinda patsono kutanga kubvisa bond note. Toenda kwachiadzwa kunoona kuti chii chiriko mari iriko ikoko. Tozopinda kumapurazi kuona vari kurima sora tovatorera minda. Hazvibatsire kunzi vanhu vane minda vasingarime vachikonzera nzara. Zim economy traditionally is agro based. Kungodaro chete zvotonaka nekuisa mbavha dzese mutorongo nemari yakabiwa toisa muhomwe yenyika.
Vana Biti kufarira kuti isvike pathousand here má agenda enyu tirikumaziva ****
Unopenga, biti ari kutaura economics iwe hauna zvaunoziva
just prove him wrong fix the economy ka
gwala 1 month ago
tinofa nenzara gore rino
U die alone boss
endai moorare akomana nachamisa akandotonge nyika ino ini ndogare landan
landan futi moende China ka hanty ndoma friends enyu
veZANU endai kuChina
CHAMISA CHIUYA, TANETA NENZIRA DZEMUSANGO.